Atọ atọ nke Search Engine Optimization | Martech Zone
Atọ atọ nke Search Engine Optimization
Na Mọnde, Nọmba 16, 2010 Saturday, October 18, 2014 Douglas Karr
Nchọgharị Ngini Nchọgharị (SEO) agbanweela kemgbe ọtụtụ afọ mana ọtụtụ ndị ọkachamara edobebeghị. M ka na-aga emume ebe ndị na-ekwu okwu na-ekwu maka usoro ochie ma na-enye ndị nwe azụmaahịa ozi na-ezighi ezi.
Anyị anaghị apụ apụ na SEO, anyị abụrụla ndị isi na ụlọ ọrụ a ọtụtụ afọ. Anyị na-na-na-enweta ịrịba ogo anyị ahịa… dapụtara na ihe na-eduga mgbe ẹsụhọde nnweta akwụ ụgwọ.
Mgbe ị na-atụle atụmatụ SEO, jide n'aka na gị search ahịa gị n'ụlọnga na-ekwu okwu na nke ọ bụla n'ime ogidi atọ nke njikarịcha ọchụchọ na ogo. Na ndị na-esonụ Ihe ngosi SEO, ị ga-ahụ ndetu na nke ọ bụla slide nke achikọtara na akara ngosi na-anọchite anya ogidi. Enwere ọtụtụ ọrụ!
SEO abụghị naanị isiokwu nyocha na ime ka ibe dị mma maka injin nchọta ihe. SEO chọrọ nyocha na ngalaba n'onwe ya iji ghọta etu ọ ga-esi sie ike ịhazi. Ọ kwesịkwara ịgụnye atụmatụ zuru ezu maka otu esi akwalite ọdịnaya gị nke ọma. Njikwa saịtị nwere ike ịchọta gị… mana nkwalite saịtị ga-emeri gị ntụpọ # 1. Nke a bụ mmewere nke SEO nke ọtụtụ uru anaghị atụle ndị ahịa ha n'ihi na ha enweghị atụmatụ dị mma iji tinye nkwalite saịtị.
Tags: ogidi atọ nke seo
Olee otú Email Email Ga-esi Ka Mma